Kodzero-dzevanhu, 20 Ndira 2019
Svondo 20 Ndira 2019
Britain Inoshevedza Mumiriri weZimbabwe neNyaya yeMhirizhonga
Amai Baldwin vakati mauto anofanirwa kushanda zviri pamutemo kunyangwe hazvo vanhu vari kuratidzira vamwe vachinzi vari kuita zvemhirizhonga. Britain inoti hurumende haifanirwewo kuvhara masaisai einternet, uye inoti iri kukurudzira kuti hurumende ivhure masaisai aya nekuchimbidzika.
Zanu-PF MDC Dzokandirana Nyoka Mhenyu paNyaya yeKuratidzira
Zvinhu munyika zvichiri zvakaita manyama amire nerongo zvitoro zvakavavharwa uye mauto nemapurisa achitenderera mumigwagwa.
America Inoshora Masoja neMapurisa Akarova Uye Kukuvadza Vanhu Vairatidzira
Hurumende yeAmerica nhasi yashora mauto nemapurisa nekushandisa chisimba chakanyanya pavanhu vairatidzira kusafara nekukwira kwemutengo wemafuta emotokari. America inoti mapurisa nemauto vanifanira kuita basa ravo nehunyanzvi vachiremekedzwao kudzero dzeveruzhinji.